China Ice Brick mveliso kunye nabathengisi | Huizhou
I-Huizhou Ice Bricks yenzelwe ukutya okutsha kunye nekhemesti ye-bio kunye nezinye izinto ezinobushushu ngexesha lokuthunyelwa kwazo. Zisetyenziselwa ukugcina ubushushu obugcweleyo kwiphakeji enye kubanda rhoqo ngelixa kudluliswa ngumoya opholileyo wobushushu.
I-1.Huizhou Ice Bricks yenzelwe ukutya okutsha kunye nekhemesti ye-bio kunye nezinye izinto ezinobushushu ngexesha lokuthunyelwa kwazo. Zisetyenziselwa ukugcina ubushushu obugcweleyo kwiphakeji enye kubanda rhoqo ngelixa kudluliswa ngumoya opholileyo wobushushu.
2.I-Ice Brick ikwabizwa ngokuba yi-ice pack freezer, ibhotile yomkhenkce, ibhlokhi yomkhenkce okanye ipakethe ye-ice PCM kumazwe ahlukeneyo.Zikwanokubonelela ngobushushu-kumboneleli wepakethi yethu yesiqhelo enemisebenzi efanayo.Umahluko ophambili phakathi kwabo ungaphandle imathiriyeli, enye ibhegi ebhityileyo kwaye enye isitena esiqinileyo nesomeleleyo esimile kakuhle, kwaye ihlala isitena somkhenkce sinokubamba imixholo emininzi ngaphakathi eyenza ukubanda kuhlale ixesha elide.
Izitena zomkhenkce zenziwe ngezinto zotshintsho lwesigaba (i-PCM) njengefriji yangaphakathi kunye nebhokisi ye-HDPE yangaphandle.Neminyaka yamava kubushushu bokupakisha ubushushu, i-Ice Brick yethu iphuhliswe kakuhle ukulungiselela ulawulo lobushushu olungcono, umgangatho ophezulu kunye nokuqwalaselwa ukusetyenziswa kwendawo yabathengi.
4.Zisetyenziselwa izinto ukuthunyelwa kunye nokuhanjiswa Kunye nengxowa yokubanda okanye ibhokisi epholileyo.
Ubungakanani bezitena kunye nobukhulu kunye neqondo langaphakathi lePCM lingenziwa ngemeko ezahlukeneyo.
I-1.Huizhou Ice Brick yenzelwe ukuzisa ukuphola kwindawo ejikelezileyo, ngokutshisa nokubanda komoya oshushu okanye uhanjiso.
2 Kuba amasimi okutya amatsha, zihlala zihlala zisetyenziswa kunye nebhokisi epholileyo ukuhambisa iimveliso ezinobuthathaka, ezinokutsha kunye nobushushu, ezinje nge: inyama, ukutya kwaselwandle, iziqhamo nemifuno, ukutya okulungiselelwe, ukutya okungumkhenkce, ice cream, itshokholethi, iilekese , ikhekhe, itshizi, iintyatyambo, ubisi, njl.
Kwindawo yasekhemesti, izitena zomkhenkce zihlala kunye kunye nebhokisi yamayeza epholileyo ukugcina ubushushu obuzinzileyo obufunekayo ukuthunyelwa kwe-reagent ye-biochemical, iisampuli zonyango, ichiza lezilwanyana, iplasma, isitofu, njl.
4. Kwaye zikwalungele ukusetyenziswa kwangaphandle ukuba ubeke isitena somkhenkce ngaphakathi kwesingxobo sasemini, ibhegi epholileyo yokugcina ukutya okanye iziselo ezibandayo xa uhamba intaba, inkampu, iipikniki, ukuhamba ngephenyane nokuloba.
5.Ukongeza, ukuba ufaka isitena somkhenkce esingumkhenkce kwifriji yakho, inokugcina umbane okanye ikhulule ingqele kwaye igcine ifriji kubushushu befriji xa icinyiwe.
Ubunzima（g） Ubungakanani(I-CM) Izinto zeBrick Ukutshintsha kwesigaba Ubushushu
Qaphela: Ubungakanani, imilo kunye nezinyuko ungenziwa ngemfuneko.
1.Non-ityhefu (Izinto zangaphakathi ikakhulu amanzi, ipolymer ephezulu, njl.) Kwaye bavavanywa ngokusemthethweni Ingxelo ye-Acute Oral Toxicity Report. Nceda uQinisekiswe ngokusetyenziswa
2.Made ukusuka kwibakala lokutya, ixesha elide, i-HDPE yangaphandle kunye ne-Eco yokupholisa i-gel enobushushu, i-Huizhou Ice Brick iyaphinda isebenze ngaphambi kokuphela kwayo.
3.Ukuthelekisa i-gel ice pack, isitena se-Ice sinobukhulu obukhulu obunokugcina amandla abandayo ngakumbi ekusebenziseni ixesha elide kunye nemilo entle exineneyo ebonisa ukucoceka nokucoceka kunye nemvakalelo yomgangatho ophezulu.
Izinketho ezi-4 ezenziwe ngokwezifiso ezikhoyo kwizinto zangaphakathi ukuya kubume bezitena zangaphandle, ubungakanani okanye ubukhulu.
5.Ibhola yethu yezitena ayinabungqina bokuvuza, inzima kwaye kulula kakhulu ukuyenza ukucoca imihla ngemihla ukuyigcina ihlaziyekile ihamba kakuhle neemveliso zakho.
Ukuqinisekisa ukusebenza okuphucukileyo kokuzisa ukubanda, nceda uqiniseke ukuba bakhenkceziswe ngokupheleleyo kwifriji, kwisikhenkcezisi okanye kwindlu efrijini ngaphambi kokuyisebenzisa.
Ngokwesiqhelo ubushushu obumiselweyo kwifriji, ifriji okanye indlu efrijini yokuqandisa isitena somkhenkce yi-10 ° C isezantsi kune-PCM ngaphakathi.
3.I-Ice Brick inokusetyenziswa iphindaphindwe ngaphambi kokuba iphelelwe lixesha.
4.Zisetyenziselwa ukuthunyelwa komgama omde okanye ukuhanjiswa kokutya okutsha kunye neyeza.
Egqithileyo Ipakethe ebandayo yangoku
Okulandelayo: Ipakethe ye-Ice Hydrate eyomileyo